htaylim's Likes - Myanmar Network
Back to htaylim's Page
အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေက ဘာတွေရသလဲ ခုနောက်ပိုင်း ခပ်စိပ်စိပ်တွေ့လာရတဲ့ ပွဲတွေကတော့ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေက တကယ်အလုပ်လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါရဲ့လား။ ဒီနေရာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းတဲ့အချက်နဲ… Discussion အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေက ဘာတွေရသလဲ 12 Likes " How to improve your English " "How to improve your English " "အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ " ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်လို Language လို့ခေါ်ပါတယ်။ Language လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင… Discussion " How to improve your English " 18 Likes Simple, Compound and Complex Sentences ဝါကျရိုး Simple sentence၊ ပေါင်းစပ်ဝါကျ Comound sentence နှင့် ဝါကျ ရော Complex sentence Simple sentence A simple sentence containsasubject andaverb. It showsasingle complete thought which can… Discussion Simple, Compound and Complex Sentences2Likes ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အဆင့်၊ အရည်အချင်း၊ ဘာတွေအရေးကြ… [Zawgyi]လူငယ်အချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ ကိုယ့်အရည်အချင်း နှစ်ခု ယှဉ်တွေးကြည့်လာရင် ဘယ်ဟာ ပိုအရေးကြီးလဲဆိုတာ ဝေခွဲရခက်လာပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ အလုပ်ခေါ်စာ အများစုမှာက အနည်းဆုံးဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ဆိုတ… Discussion ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အဆင့်၊ အရည်အချင်း၊ ဘာတွေအရေးကြ… 39 Likes
ဝေဖန်ဆွေးနွေး စကားစစ်ထိုး ကျွမ်းကျင်စေဖို့ UK vs India Debating Matters Competition အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာမြို့ Withington မိန်းကလေးကျောင်းမှာ ပညာသင်နေတဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် … Discussion ဝေဖန်ဆွေးနွေး စကားစစ်ထိုး ကျွမ်းကျင်စေဖို့ 10 Likes အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၂) ရှောင်ရန်စကားလုံးများ၏ စွမ်းအား ပုံမှန် သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့ စကားတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ နေ့စဉ် ကျောင်း၊ လုပ်ငန်း၊ မိသားစုထဲမှာ ပုံမှန်ပြောဆို သုံးနှုန်းလေ့မရှိတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။ အချု… Discussion အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၂) 55 Likes အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၃) အသံ၏ အန္တရာယ်များ အသံထွက် (pronuncing) ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ အသံ ၄၄ သံရှိတယ်။ အခြားဘာသာစကားတွေမှာတော့ ၂၅ သံနဲ့ အသံ ၃၀ ကျော်ကျော် လောက်ပဲရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဟာ အသံပိုင်း… Discussion အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၃) 18 Likes အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၁) စာတွေ (words) ဟာ အသံတွေ (sounds) နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ စာနဲ့အသံ ဆက်စပ်မှုကို မှန်ကန်အောင်မသုံးတတ်ရင် ဒုက္ခတွေ့တတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ taboo လို့ခေါ်တဲ့ ရှောင်ရန်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဆောင်ရန… Discussion အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၁) 81 Likes လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ… Bob's your uncle (ဘော့ဘ်က မင်းဦးလေးလေ။) အခြားအသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများစွာကဲ့သို့ပင် Bob's your uncle (ဘော့ဘ်က မင်းဦးလေး = ကိစ္စတစ်ခုကို မည်မျှလွယ်ကူစွာလုပ်၍ရကြောင်း ဖော်ပြရာတွင် သုံးသောစကား) ၏… Discussion လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ… 29 Likes အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသူများရဲ့ အကျင့်ကောင်း ၅ ခု [Zawgyi]မိမိတုိ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာရောက်ရှိအောင် ဘယ်လိုမျိုးအကျင့်ကောင်းတွေ မွေးမြူသင့်သလဲဆိုတာကို ဗြိတိသျှကောင်စီရဲ့ Teaching English blog award ဆုရှင် Martin Sketchley က တင်ပြ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသူများရဲ့ အကျင့်ကောင်း ၅ ခု 46 Likes ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပျက်စီးစေတ… &lt;Zawgyi&gt; လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းအလိုက် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ့်ရဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အပြုအမူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို လျှော့က… Discussion ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပျက်စီးစေတ… 43 Likes
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် [Zawgyi] အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတိုင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှိတဲ့လူတိုင်း ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်နေသလား။ ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်ထ… Discussion လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် 41 Likes အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးကို ပြောင်းလဲစေသည့် ဆန်းသ… အရာရာတိုင်းဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလျှက်ရှိပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာများ နဲ့အတူ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဟာလည်း အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလျှက်ပါဘဲ။ အခုပြောပြချင်တာ ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအပေါ် (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးကို ပြောင်းလဲစေသည့် ဆန်းသ… 15 Likes နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျောင်းသားတွေကို ဘ… ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ Teaching English Blog ဆုရှင် Chia Suan Chong မှ ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာကို အသုံးချတတ်ရန် ပြင်ဆင်ပုံ နည်းဗျူဟာသုံးသွယ်ကို တင်ပြထားပါသည်။ ခေတ်ပေါ်ဘ… Discussion နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျောင်းသားတွေကို ဘ… 14 Likes
အချိန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသုံးတွေ မှန်ကန်ကြဖို့ [Zawgyi]အင်္ဂလိပ်စာကို ရေးသား ပြောဆိုတဲ့အခါ အချိန်အခါတွေ၊ နေရာတွေ စသည်တို့ကို မကြာခဏ ညွှန်ပြ ပြောဆိုရေးသား ကြရပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ပြောရတာလွယ်ကူတယ် ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ အချို့သော အသုံးတွေက ဘယ်ဟ… Discussion အချိန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသုံးတွေ မှန်ကန်ကြဖို့ 94 Likes ထိရောက်စွာ ချီးမွမ်းရေးသား နည်းလမ်းများ ထိထိရောက်ရောက် ချီးမွမ်းရေးသားတတ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဘယ်လို ရနိုင်ပါမလဲ။ အလွယ်တကူ ရနိုင်တယ်လို့ ဖြေပါရစေ။ စာအုပ်တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို ချီးမွမ်းရေးသား ရတော့မယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက်… Discussion ထိရောက်စွာ ချီးမွမ်းရေးသား နည်းလမ်းများ 64 Likes Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… [Zawgyi] What are the benefits of positive thinking? Benefits of positive thinking အကြောင်း မဆွေးနွေးမီ "What is positive thinking?" ကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ "Positive thinking is to loo… Discussion Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… 53 Likes ရာသီဥတုအကြောင်း ပြောခြင်း How was the weather when you left? ခင်ဗျားခရီးစထွက်တုံးက ရာသီဥတု ဘယ်လိုရှိခဲ့ပါသလဲ။ It was raining, as usual!/ It was very nice, actually. ထုံးစံအတိုင်း မိုးရွာနေတယ်/တကယ်တော့ ရာသီဥတုက သိပ်ကောင်းတယ… Discussion ရာသီဥတုအကြောင်း ပြောခြင်း 98 Likes လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင်တန်းများ [Zawgyi] ယခုအခါ ကုမ္ပဏီများမှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမျိုးမျိုးသော ဌာနတွင်း သင်တန်းတွေကျင်းပပေးတာ၊ ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပြင်ပသင်တန်းတွေ စေလွှတ်ပေးတာ စသဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ ရ… Discussion လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင်တန်းများ9Likes အလုပ်ရှာပေးပါ [Zawgyi] အခုခေတ်လူငယ်အများစုနဲ့တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏအကြားရဆုံးစကားတစ်ခွန်းကို ပြောပါဆိုရင် “အလုပ်ရှာပေးပါ” ဆိုတာပါပဲ။ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးအ… Discussion အလုပ်ရှာပေးပါ 13 Likes မျိုးဆက်သစ်တို့ တိုးတက်ဖို့ စာဖတ်ကြပါစို့ [Zawgyi] ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်လျက်ရှိသောကမ္ဘာ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များအားအချိန်မီသိရှိနိုင်ရန်၊ ဗဟုသုတရှာမှီးရန်၊အသိပညာတိုးပွားစေရန်၊အတွေးအခေါ်မြင့်မားစေရန်နှင့်စိတ်အာဟာရဖြည့်ဆည်း… Discussion မျိုးဆက်သစ်တို့ တိုးတက်ဖို့ စာဖတ်ကြပါစို့ 18 Likes